Enoch rigosiri | Apg29
Ọ bụ dị ka na Enoch. "Ị hụrụ ya ya ọzọ." Ọ dị nnọọ okụrede enweghị a Chọpụta.
Ọ bụ dị ka na Enoch. "Ị hụrụ ya ya ọzọ." Ọ dị nnọọ okụrede enweghị a Chọpụta. N'ihi ya, ọ ga-abụ mgbe Jesus weere ya na ezinụlọ ya si n'ala. Ekpe ga naanị na-achọpụta na ndị mmadụ na-na mberede na-arahụ.
Wagharịrị udo na Chineke
Enoch, nke asaa site na Adam bụ nwoke na-eje ije mkpakọrịta na Chineke. Ndụ ya niile na uche Onyenwe anyị. Anyị na-agụ banyere ya ná Mb, Hibru. 11: 5:
"Ọ bụ okwukwe Inọk e weere ka o ghara ịnwụ ọnwụ, na hụrụ ya ọzọ n'ihi na Chineke weere ya. N'ihi na tupu e, o nwere na-agba akaebe na ọ masịrị Chineke. "
The ezi omume bụ Ebel, dị ka e dekọrọ na aga na amaokwu e gburu site nwanne ya Cain na nwụrụ n'ihi okwukwe ha. Ma Enoch anwụghị na niile.
Na nuBibeln kwuru, "i nwere ike ịchọta ya," na 1917 translation: "ha hụrụ ya ọzọ."
Na-abụghị gị chọta Enoch, ma ọ bụ otú o nwere na-apụta na ha na-achọ ya, ma na-enweghị ihe ịga nke ọma. Ọ bụ na nọgidere efu.
Mgbe owuwe-eme, ihe na ọlu di n'aru ìgwè mmadụ Chọpụta akwụsị n'ụwa. Ọ bụ nzọpụta ìgwè mmadụ na Jizọs weere. A ga-enwe ọgba aghara n'ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-atụ uche ndị ezinụlọ ha. Ndị a hapụrụ ahapụ ga chọọ obi nkoropụ n'ihi na ha hụrụ n'anya.
Ma ha agaghị achọta ha. Ha ga-eti, sị, "Olee ebe nne na nna m?" "Olee ebe bụ ụmụ m?" "Olee ebe bụ ụmụnne m?" Olee ebe bụ ndị enyi m? "
Ọtụtụ na-adịghị njikere
Ọtụtụ ndị mmadụ ga-adị njikere mgbe owuwe etịbe, ma na-ero ụra, Ndị Kraịst. Ha nwere ike iche na ihe nne ekpere na Nna ezi omume ndụ nwere ike inyere ha aka heaven. Ma ọ bụ na ọ bụ iji na-n'ozuzu okpukpe, ụdị ọma, na-eme dị ka ihe kasị mma ha nwere ike.
Anyị na-agụ na ọ bụ "n'okwukwe Enoch e." Na-aga na Jesus weere ya na ezinụlọ ya si n'ala ga nwere a ndụ okwukwe na Kraịst. Ị ga na-natara Ya dị ka Onye Nzọpụta ha. Enoch A họpụtara n'ihi na ọ "na-eje ije mkpakọrịta na Chineke" na "na ọ masịrị Chineke."
The Bible na-ekwu na atọ igwe njem: Enoch rigosiri, Ịlaịja onye amụma rigosiri, ma rịgoro nke Jesus. Anyị bụ ndị nke gbapụtara ìgwè ga-eme rịgoro, Jesus fetches anyị site na owuwe.